Gangasagar - Sundarbans 7N Tour Kolkata Tour Package
Tour Code: 220 | Programan'ny 07 Nights
DAY 1: KOLKATA ARRIVALY SY TONGA TONTOLO IRAY
Rehefa tonga any amin'ny toeram-piantsonan'i Howrah ao amin'ny hotely. Taorian'ny fisakafoanana vaovao, fitsangatsanganana vilan'ny Victoria Memorial sy kianjan'i Eden Garden. Nandritra ny alina tany Kolkata.
DAY 2: KOLKATA - MAYAPUR - KOLKATA
Ny marainan'ny alin'ny sakafo maraina dia mandao an'i Mayapur ary mitsidika ny Tempoly malaza Iskcon. Miverina any Kolkata sy mandritra ny alina.
Taorian'ny nandaozan'ny sakafo maraina ho an'i Gangasagar. Avy eo dia miampita ny renirano ary manao ny tanànan'i Sagar. Avy eo dia niverina tany Kolkata sy tamin'ny alina.
Fanamarihana ho an'ny Gangasagar Tour:
Hanolotra fiara Ac ho an'i Kolkata ho Ferry Ghat izany Lot Lot No. 8 / Harwood Point (90 Km.) Ary niverina tany Kolkata. Rehefa tapitra ny Lot No. 8 dia tsy maintsy mandray ny sambo hiampita ny renirano Muri Ganga ho an'i Kachuberia. Ary makà fiara tsy miankina ho an'ny nosy Sagar avy any Kachuberia. Ny saran'ny fandefasana sy ny saran'ny fiara eo an-toerana avy any Kachuberia mankany amin'ny nosy Sagar & miverina amin'ny tenanao manokana.
DAY 4: KOLKATA FAHADY
Rehefa avy nitsidika ny Howrah Bridge, Belur Math, Dakshineswari Kali Temple, Tempoly Kalighat Kali, Tranomasina Indiana, Trano Reny & Birla Temple. Nandritra ny alina tany Kolkata.
DAY 5: KOLKATA - SUNDARBAN
Ny maraina taorian'ny sakafo maraina dia nalaina tao amin'ny hotely ary nidina tao Priya Cinema. Avy eo dia halefa any Gothakali ianao. Avy eo dia miareta mankany amin'ny tobin'i Tiger. Ny alina amin'ny Sundarban.
Taorian'ny fitsidihana sakafo maraina tao Sundarban. Nandritra ny alina tao Sudarban.
Aorian'ny sakafo maraina dia mandeha mankany amin'ny tranobe ao Priya Cinema. Dia hoesorina ao amin'ny hotely Kolkata ianao. Nandritra ny alina tany Kolkata.
DAY 8: DROP AT AIRPORT / STATION
Miala aina ny andro ary midina ny tolakandro ao amin'ny seranam-piaramanidina / gara mandeha amin'ny dia lavitra.
Fepetra Politika Politika fandefasana Blog Testimonials Mifandraisa aminay Car Rental Sitemap
Sand Pebbles Tours © 2018. Zo rehetra voatokana